ओलीलाई काँध थापेर संसद जोगाउने प्रचण्डको अनौठो कला - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
ओलीलाई काँध थापेर संसद जोगाउने प्रचण्डको अनौठो कला
प्रचण्डहरुको एउटा तर्क के छ भने आफूले समर्थन फिर्ता लिएमा संसद जीवित रहँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेर फेरि चुनाव घोषणा गर्छन्
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध पार्टीभित्रै चर्काए । पार्टी नै फुटाएर सडकमा उत्रिए । ओलीसँग जाने आफ्ना पार्टीका मन्त्री एवं सांसदहरुलाई कारवाही गरे । तैपनि, माओवादीका तर्फबाट सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सकेका छैनन् । ओलीलाई मन नपराउँदा पनि समर्थन कायम राखिरहनुपरेको छ ।
प्रचण्डले आस गरेका विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समेत समर्थन फिर्ता नलिएकामा असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई समर्थन फिर्ता लिन नसकेकामा बारम्बार चुनौती दिइसके । यति हुँदा पनि प्रचण्ड ओलीकै समर्थक बनिरहेका छन् । सरकारलाई सिंगो माओवादीको टेको दिइरहेका छन् ।
प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै यो सरकार अल्पमतमा पर्छ । ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसदमा बहुमतको विश्वास जित्न ओलीलाई त्यति सजिलो छैन, जति प्रचण्डले ठानेका छन् । तर पनि प्रचण्ड खुट्टा कमाइरहेका छन् । किन ? अहिले सबैको जिज्ञासाको विषय यही बनिरहेको छ ।
प्रचण्डहरुको एउटा तर्क के छ भने आफूले समर्थन फिर्ता लिएमा संसद जीवित रहँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेर फेरि चुनाव घोषणा गर्छन् ।
संसद जोगाउने ठेक्का प्रचण्डले लिइदिएपछि ओलीलाई थप हाइसञ्चो भएको छ । तर, अब प्रश्न उठ्छ, यदि संसद जोगाउनका निम्ति समर्थन कायमै राखेका हुन् भने अझै दुई वर्ष प्रचण्ड यसैगरी थेगेर बस्छन् त ? संसदको यतिसाह्रो माया थियो भने हिजो ओलीसँग एउटै पार्टीमा हुँदा संसदमा किन हलो अड्काएर राखेको ? किन सभामुखमार्फत् महत्त्वपूर्ण विधेयक रोकेर राखेको ? किन एमसीसीलाई सदनमा छलफलै हुनबाट रोकिएको ?
अझ योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने ओलीलाई काँध थापेर संसद जोगाउने उपाय कत्ति बुद्धिमत्तापूर्ण त ? जसरी प्रचण्डले संसद विघटनको कदम बदर भएपछि ओलीलाई एक मिनेट पनि पदमा बस्ने नैतिकता छैन भन्दै थिए, त्यसैगरी ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ने नैतिकता पनि त प्रचण्डसँग छैन नि । आफूले निरंकुश, प्रतिगमनकारी आदि इत्यादि भनेका ओलीलाई काँध थाप्नु कति नैतिकतायुक्त छ त ? यसतर्फ प्रचण्डले विचार गरेका छन् ?
कांग्रेसको दबाबमा पछिल्ला दिन प्रचण्डले केही सुस्त पाइला चाल्न खोजेका छन् । केन्द्रमा आफ्नो पार्टीबाट सांसद बनेका तर ओलीको पार्टीमा पुगेका चार मन्त्री एवं सांसदहरुलाई निलम्बनको कारवाही गरेर संसदलाई पत्राचार गरेका छन् । त्यस्तै गण्डकी सरकारमा रहेका दुई मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाएका छन् । लुम्बिनीका केही सांसद पनि कारवाहीको प्रक्रियामा छन् । सुदूरपश्चिममा पनि माओवादी छाडेका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् । तर, एमालेले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई उनले फिर्ता बोलाएका छैनन् ।
विस्तारै एमालेबाट अलग्गिने र ओली खेमालाई एक्ल्याउने प्रक्रियामा प्रचण्डले पाइला चाल्न त खोजेका छन् तर ती हरेक पाइला उनकै निम्ति भारी परिरहेका छन् । प्रदेशमा प्रचण्डले साथ छाडेपछि अर्को सानो कुनै दलले समर्थन गरिदिँदा एमालेको सरकार बहुमतमा रहन्छ । त्यस्तै केन्द्रमा पनि प्रचण्डले साथ छाड्नेबित्तिकै महन्थ ठाकुर जसपाका बहुमत सदस्य लिएर ओलीको सरकार जोगाइदिन्छन् । अनि प्रचण्ड ढुक्कैले दुई वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ ।
यी सारा परिदृश्य हेर्दा प्रचण्डको राजीतिक सक्षमता र चातुर्यको सीमा सकिएको छ । राजनीतिक कौशल सकिएपछि गरेका हरेक निर्णय संगतिहीन लाग्न थाल्छन् । अहिले प्रचण्डका गतिविधि त्यस्तै देखिन्छन् ।